Wararka Maanta: Arbaco, May 22, 2013-Gudoomiyaha Deegaanka Buusaar ee Gobolka Gedo oo ka Badbaaday Qarax lagula beegsaday Hooygiisa
Qaraxan oo la sheegay in la saaray saanqaafka kore ee guriga uu daganyahay gudoomiyaha ayaa waxa uu sababay dhaawacyo soo gaaray laba qof oo ka mid ah ehelka gudoomiyaha, waxaana qaraxaasi ka badbaaday gudoomiyaha oo lala damacsanaa weerarka.
Dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxa ayaa lagu daweeynayaa Isbital ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo.
Col C/laahi Buulle oo ah madaxa ciidamada danbi baarista galbeedka gobolka Gedo oo HOL u waramay ayaa sheegay in qaraxu ahaa mid la saaray saanqaafka kore ee guriga uu daganyahay gudoomiyaha, wuxuuna intaa ku daray in qaraxu ay ku waxyeeloobeen laba qof oo ka tirsan qoyska gudoomiyaha.
Gudoomiyaha ayaa ku eedeeyay qaraxan in ay ka danbeeyay dagaalyahannada Al-shabaab, wuxuuna xusay in ay wadaan baaritaanno la xiriira arintaasi.
Ilaa imika ma jiraan masuuliyiin katirsan Al-shabaab oo ka hadashay weerarkaasi, haseyeeshee weerarrada ceynkan oo kale ah ayaa aalaaba ka dhaca gobollada dalka Soomaaliya.